Sajhasabal.com | Homeदुर्घटना हुनुअघि पाइलट र कन्ट्रोल रुमबीच के कुराकानी भयो ? चेतावनीको अडियो संवाद सुन्नुहोस
दुर्घटना हुनुअघि पाइलट र कन्ट्रोल रुमबीच के कुराकानी भयो ? चेतावनीको अडियो संवाद सुन्नुहोस
फागुन २८, काठमाडौं । यूएस बंगला एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटना हुँदा ४९ जनाको मृत्यु भएको छ । साथै विमानमा रहेका २१ जना घाइते भएका छन् ।
एकजनाको अवस्था भने अझै अज्ञात छ । विमान दुर्घटनाअघि कन्ट्रोल रुम र पाइलटबीच भएको सम्वाद सावर्जजिक भएको छ ।
पाइटलः ओके । हामी दायाँ फन्को लिँदैछौं । रन वे ०२ तर्फ हेर्दैछौं ।
कन्ट्रोल रुम: ९ लिमा ट्यांगो ! अहिलेकै स्थानमा बसिरहनुस् ।